Hiran State - News: Hawada Somaliya inagaa maamuleyna maadama aanu nahay dal xor ah (Farmaajo)
Hawada Somaliya inagaa maamuleyna maadama aanu nahay dal xor ah (Farmaajo)
Jimco:(hiranstate.com)- Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Max’ed C/laahi Max’ed Farmaajo ayaa waxaa uu sheegay in dowladda ay bilaabayso ilaalinta Hawada Somaaliya si loo kontaroolo dhaq dhaqaqa Duulimaadyada Hawada Soomaaliya.
Farmaajo oo u waramayay qaar ka mid ah wakaalada caalamiga ah ee fadhigoodu yahay Mareykanka ayaa waxaa uu sheegay in xiligaan wixii ka dambeeya ay dowladda Somaliyaay kala wareegayso Qaramada Midoobay la socoshada Hawada Soomaaliya oo muddo aad u fog Maamulaysay Jimciyadda Qurumaha ka dhaxaysa.
“Hawada Somaliya, waxaa iska leh shacabka Somaliyeed, wadankeenu waa wadan Madaxbanaan, sidaasi darteen waa inaan Maamulnaa Hawadeena” ayuu si geesinimo leh u yiri Wasiirka 1aad Farmaajo.
Saraakiil ka tirsan Qaramada Midoobay ayaa waxaa ay Wargayska u sheegeen in ay ogol yihiin in dowladda Soomaaliya ay door muhiim ah ka cayaarto Maamulidda hawada dalka Somaliya, hayeeshee waxaa ay sheegeen inay ka wal walsan yihiin sida ay u suurto gali karto arintaasi oo ah mid culus maadama ay dowladda Soomaaliya iminka dagaalo xoogan ay kala horjeedo Ciidamada Xarakada Shabaab.
Arintaan ayaa waxaa ay imaanayaa xili dowladda Somaliya ay wada hadalo kula jirto dib lumaasiyiin reer Galbeed ah oo shaki ka muujiyay danta dowladda KMG Soomaaliya ay ka leedahay Maamulida Hawadeeda taasi oo aysan hore ugu baran dowladahii ka horeyey iyada.
R/wasaaraha Somaliya ayaa hadalkiisaan xitaa hadii uusan hirgalin muujinaya in shacabka Somaliyeed iyo xukumadaha imaan doona ay ugu yaraan bilaabi doonaan la xisaabtanka ajaanibta Bada, Hawada, bariga iyo xuduudaha Somaliya iska maamulanayey 20kii sano ee ina dhaaftay.
Waa talaabo geesinimo leh in lala xisaabtamo markani beesha caalamka halkii aanu inaga isku mashquuli laheyn si dalka iyo dadka Somaliyeed loo bad baadiyo.
Dalka Somaliya mudooyinkii danbe dhulka u dhaw xeebaha koofureed oo dhan waxaa iska maamulanayey wadamo reer galbeed ah oo iyagu Bada Hindiya ka soo gaca kedibna ugaarta Somaliya si sharci daro ah iskaka qaata, taasi oo ugu yaraan hadii arintaani hirgasho ay adkaan doonto in hawada somaliya lagu xad gudbo.
· admin on April 15 2011 21:20:42 · 0 Comments · 1737 Reads ·
14,569,553 unique visits